Kwixesha la mandulo, kwakukholelwa kakhulu ukuba umfazi wayenjongo yokuzala, kwaye isondo asiyidlala indima ebalulekileyo kuye. Ngoko ke, umfazi okhulelweyo akafanele angene kuwo aze abonise umdla kuwo. Nangona kunjalo, izibini ezininzi zanamhlanje zenza isondo ngexesha lokukhulelwa, kwaye ziyimpumelelo. Kukho, kunene, ubunzima abathile, kodwa bayakwazi ukunqoba kalula. Ingaba isondo siyingozi ngexesha lokukhulelwa, yintoni imiphumo enokuba nayo yonke into - isenomdla kubo abaninzi.
Ngokomnye uphando, abafazi abaninzi banomdla kwisini ngexesha leenyanga ezintathu zokuqala. Oku kubangelwe, ngaphezu kwakho konke, ukuxhatshazwa kwe-toxemia kunye nokutshabalaliswa kwentlalo-ntle. Nangona kunjalo, ngekota yesibini, xa impilo iphucula, imvakalelo iphakama kwaye loo ntokazi ivuyayo kwaye ivuya, umnqweno uyakhula, kwaye akukho mithintelo yokuthintela ukubambisana. Kwaye, ekugqibeleni, kwisigxina sokugqibela umnqweno uphinde upheleke, njengoko umzimba womfazi okhulelweyo uqala ukulungiselela ukuzalwa okuzayo.
Kungekudala, izazinzulu zakwa-Israyeli zenze uvavanyo apho abafazi abakhulelweyo bathatha inxaxheba. Isiqingatha sazo sinobudlelwane bokuziphatha ngokwesini, ngelixa enye inxalenye ibambe isikhundla sokuziyeka. Ngokweziphumo zolu cwaningo, kubonakaliswe ukuba inani lamathambo kunye nesantya sokusebenza kwimibini yomibini iyafana. Oku kuphakamisa ukuba ukuba unomnqweno ongenakunqwenelekayo kunye nesifiso somlingane, ke ungagcini, kodwa ngokuchaseneyo, nceda umyeni wakho kunye nawe. Emva koko, siya kuzama ukudibanisa imibuzo ephakamileyo ephakamileyo kwiimama ezizayo ezihambelana nesihloko sesini.
Kunzima ukufumana i-orgasm.
Ngokuchasene noko, abaninzi abafazi bafumana i-orgasm ecacileyo ngexesha lokukhulelwa, okanye nokuba ngowokuqala ebomini babo. Okokuqala, ubulili buya kuba buhlungu, kwaye xa i-penis igubungela kwiindonga zayo, unina olindelekileyo uyavuya ngakumbi kunemeko yakhe eqhelekileyo.
Okwesibini, i-clitoris iyanda. Yaye yena, njengoko uyaziwa, ngumthombo oyintloko wokuzonwabisa. Ngoko ke, umfazi okhulelwe ngokukhawuleza ufikelela kwisiqhamo.
I-Orgasm inokuvusa ukuzalwa ngaphambi kokuzalwa.
Oku kungqinelaniyo. Ngaphambi kokuba umntwana avuthe, kwaye isibeleko asifikeleli kwilizwe elithile, akukho nto iyakubangela ukuzalwa kwangaphambi kokuzalwa. Ngokuchaseneyo, kukholelwa ukuba i-orgasm inefuthe elihle kumntwana. Emva kwakho konke, ngexesha lokunyamekela kwiimononeli zegazi zolonwabo zifake - i-endorphins kunye ne-enkipalin - zinomphumela onenzuzo kumntwana. Nangona kunjalo, kwimimiselo yakutshanje, xa umntwana evuthiweyo kwaye ekulungele ukuza ehlabathini, kungcono ukuyeka ukulala ngesondo, kuba ukuphambana kwesibeletho kungabangela ukuzalwa kwangaphambi kokuzalwa.
Ulwabelana ngesondo luya kuthintela njani imeko yomntwana?
Akukho mpendulo ecacileyo kulo mbuzo. Ngexesha lokukhulelwa, uvakalelo kwintsimi ye-pelvic iya kwanda, kwaye ukuvakalelwa okubuhlungu kunokuba buhlungu, ngoko ukulala ngesondo kunokuba nokuzisa ngakumbi kunokoko wesondo. Nangona kunjalo, kukho ingozi yokungena kwiibhakteria zamathumbu emanzini.
Ngaba kunokwenzeka ukubandakanya ngesondo somlomo?
Kunokwenzeka, kodwa kuphela ngokucophelela. Ukuba umyeni unayo i-herpes emlonyeni wakhe, kungcono ukuba ugweme ngendlela enjalo yokulala ngesondo, njengoko kunokukhuphaza ukuphuhliswa kwintsholongwane ye-microflora yesini kunye nokuguqulwa ngokulula ibe yi-herpes zomzimba. Ukongezelela, lo ngumthwalo owongezelelweyo kwi-immune system yomama, okuqinisekileyo, engathandekiyo.
Ngaloo ndlela, ngokusekelwe kuzo zonke iingxabano kunye neengxabano, kunokuxelwa ukuba kwiimeko ezininzi, isondo ngexesha lokukhulelwa akuyingozi kumntwana, kwaye unokuyenza ngokukhuselekileyo. Nangona kunjalo, kukho izizathu ezibangela ukuba ugqirha unokukucebisa ukuba ubaleke.
Ukwabelana ngesondo kuyingozi xa iqabane lakho linesifo socansi;
kukho isongelo sokupheliswa kokukhulelwa;
Kwintsapho kwakukho ukuzalwa kwangaphambi kokuzalwa;
Ukunamathiselwa okuphantsi kwepentecenta;
ukuvuza kwe-amniotic fluid.
Ukuba nasiphi na isizathu asikwazi ukubandakanya ngesondo ngokwesintu, ngoko akufanele ushiye ngokupheleleyo. Kukho iindlela ezahlukeneyo ozikholisa wena kunye nomyeni wakho.
Ngosizo lwe-caresses elula (i-petting).
Ukuvuselela ngomlomo nangomlomo we-clitoris kunye nemimandla efanelekileyo.
Ubudlelwane obuphakathi kweminqweno yowesifazane engagqitywanga ngokupheleleyo, kwinqanaba lebhuba, xa intloko ingabonakaliswa ngokupheleleyo kwisini.
Ukwabelana ngesondo phakathi kweentlanzi zamathambo. Ubisi ngexesha lokukhulelwa landa kwaye luba lukhuni ngakumbi, oluvuyisa ngakumbi olu hlobo lwesondo.
I-Coitus intra femora (kuphela phakathi kwamalungu e-hip).
Yaye ukhumbule ukuba isondo siyingxenye ebalulekileyo yomtshato kwaye sinciphisa omnye umxhelo wokuzixela kunoma yiyiphi imeko akufanele ibe. Ngexesha lokukhulelwa, ibhinqa idinga inkxaso yakho kunanini ngaphambili, kwaye rhoqo ukuthetha ngezinto zokomoya kunye ne-caresses zizisa ukwaneliseka okwedlula isenzo sokwabelana ngesondo. Uthande kwaye ujikeleze kunye nenkathalo yabasetyhini bakho.
Ukukhulelwa ekwindla: yintoni ofuna ukuyazi?
Iingoma ezintsha malunga nokuphambili
Imigaqo yokusetyenziswa kovavanyo lokukhulelwa
I-cookie i-almond kunye ne-orange
Yintoni abantu abalindayo kwintsebenziswano kunye nomfazi: Iengqondo
Ukuphulukiswa kunye nemilingo ye-chalcedony
Ukutya kweLunar - Ikhalenda yeLunar
Umphumo wokuvavanywa kwe-DNA yonyana ongekho mthethweni waseSpartak Mishulin kubangele isityholo kwi studio "Bavume bathethe"
Ndiyothuka kangangoko ndiyintanda yam intanda?
I-Epiphany 2017 - ndiyakuhalalisela kwivesi, iprose, i-postcards kunye ne-sms. Umfutshane kunye nekhamkcolo ngokubhabhathiswa kweNkosi
Konke malunga nobudlelwane bokuqala, kunye nendlela yokuhlangabezana nayo?